Dabka iyo Dhismooyinka TCDD Waxaa Lagu Sameeyay Gudaha Magaalada Ceyn | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliCiidanka Dab-demiska iyo Dhismooyinka TCDD waxaa ku faafay gudaha magaalada Dheecaan
25 / 03 / 2020 41 Kocaeli, tareenka, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY
Dabka iyo dhismayaasha tcdd si qoto dheer ayaa loo jeeriyay
Marka la eego baaxadda tallaabooyinka caafimaad ee laga qaaday guud ahaan dalka, hawlihii jeermis-ka-qaadista ee ay fuliyeen kooxaha Dagmada Derince waxay ku socdaan xawaare buuxa.
Guusha Dabka iyo Dhismooyinka TCDD
Ka dib markii lagu dhawaaqay soo bixitaanka cudurka 'coronavirus' cusub (Kovid-19) ee dalkeenna, Degmada Derince waxay adkeysay dadaalkeeda nadaafadeed si ay dadka deegaanka uga ilaaliso cudurka. Marka la eego cabirrada la qaaday, kooxaha jeermiska ee laga dhex abuuray degmada waxay sii wadaan shaqadooda xilli xilli ah, halka hawlihii jeermis-dilidda ay ka sii socdaan aagagga ay adeegsadaan dadweynaha, gaar ahaan hay'adaha dowliga ah iyo ururrada. Xaaladda guud, kooxaha degmada Derince waxay ka sameeyeen shaqo nadiifin dhameystiran dhismayaasha adeegga ee Kooxda Dabka iyo TCDD ee degmada.
Farriin ka socota Madaxweyne Aygün Guriga joog
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in dagaalka ka dhanka ah coronavirus uu sii socon doono si adag, ayuu Duqa Magaalada Derince Zeki Aygün ku yiri bayaankiisa warbaahinta bulshada: “Dhamaan dhismayaasha dadweynaha, goobaha cibaadada, xarumaha caafimaadka, bangiyada, laamaha PTT, muhaajiriinta xaafadaha, basaska dadweynaha, tagaasida ganacsiga, basaska, Waxaan ka hortagnaa joojinta, bangiyada ATM-yada, garoomada lagu ciyaaro iyo goobo badan oo dadweyne. Waxaan sii wadnaa howlaheena nabadeynta iyo caafimaadka dadkeena iyadoo aan loo eegin saacadaha shaqada. Waxaan rumeysanahay inaan ka tagi doonno howshan annagoo idanka Allah idinka ah. Waan kuu shaqaynaa. Adiguba, sidoo kale, annaguba gurigayagu ha noolaato hawshaan. ”
Xafiiska Laanta Socdaalka ee Sivas ayaa soo booqda shaqaalaha Tüdemsaş dab-demiska
Mitirka mitirka 2.5 si looga dhigo gaariga
Dab-demiyayaashu ma geli karaan waddada sababtoo ah tareenka ku yaala Izmir